mushaTURKEYTurkish Mediterranean Coast33 MersinMESİAD: 'Chiedza Rail System chinofanirwa Kuvakwa Panzvimbo yeMetro kuMersin'
MESİAD: 'Chiedza Rail System chinofanirwa Kuvakwa Panzvimbo yeMetro kuMersin'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, Turkish Mediterranean Coast, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Metro, TURKEY 0
mesiad mersine Subway panzvimbo yechiedza njanji system
MESİAD Mutungamiri Hasan Engin akasimbisa kuti Mersin haina nguva yekurasikirwa kugadzirisa dambudziko rekufambisa, rinova rimwe rematambudziko makuru eguta redu, uye akataura kuti gwara rechitima njanji rinofanirwa kuitwa panzvimbo pechitima chakarongwa muMersin. Kuendesa Metro kuchave kuri kudhura Mutungamiriri Engin, "Danho rekufambisa raMersin nedanho rejecha, rinofanira kugadziriswa munguva pfupi uye nemutengo unodhura," akadaro.
Mersin Industrialists uye Bhizinesi Vanhu Association (MESİAD) Sachigaro weHasan Engin akati dambudziko rekufambisa reguta rakakura seMersin rinofanira kugadziriswa nekukurumidza, zvikasadaro Mersin ndiye anenge arasikirwa. Mutungamiri Engin, dambudziko rekufambisa; kusvibiswa kwemhepo, hupfumi hwedhorobha pamwe nekushanya kwezvinhu zvakarova dambudziko rakakura kwazvo rekufambisa iro razova gangren yeMerin yakagovana neruzhinji zvirevo. Mutungamiri Engin akakurudzira vatungamiriri vemunharaunda nemamwe masangano kuti vatore matanho nekukurumidza.
"METRO MERSIN HAZVISI KUTI ISANGANETE"
Mutungamiri weMESIAD, Hasan Engin, akataura chirevo cheMersin Subway, akazivisa kuti basa iri richatanga ku2020 kuMersin, akataura kuti chirongwa cheMetin hachifanirwe kuvezwa pamusoro peMersin uye kuti hupfumi hweguta uye bhajeti reMetropolitan Municipality richadzikira.
Mutungamiri Engin; Jerine MuMersin, iro guta rekushanyira, vafambi vanofamba mumakomo uye gungwa maonero nekuda kwechiedza njanji system inogona kupedzwa nekukurumidza uye mutengo unoderera. Dambudziko rekufambisa rinofanira kugadziriswa neyakajeka njanji system mumatanho, munguva pfupi, nemutengo unodhura. Mersin Metropolitan Municipality inogona kupedzisa basa iri nemari yayo pasina kukosha kwemari yekunze. Metro projekiti haina kukurumidza ”.
PRESIDENT ENGİN ANOPA MUENZANISO WOKUSIMBISA ZVINYORWA
Meya Hasan Engin akataura kuti sarudzo dzisina kunaka dzicharasika kuMersin nekufananidza nzira dzekutima nzira mumaguta apasi nemaguta akavakidzana eAdana akawedzera, "Mersin Metropolitan Municipality pamwe nemamwe mahurumende emunharaunda anofanirwa kuburitsa mhinduro nekukurumidza. Radical sarudzo dzinofanira kutorwa kuti ubatsire Mersin, kana ukaita Subway hapana anogona kubata. Semuenzaniso, muAdana; nekuda kwenzira isiriyo uye zvido zvavasina kuona kufarira. Adana ave achirwadziwa kwemakore. Kana tikatarisa iwo muenzaniso mumatunhu akapoterera; vanhu vanofarira light njanji yekufambisa pamwe nenyika. "Haisi basa kufamba makiromita muguta regungwa musina kugadzira pasi pevhu muchitarisa gungwa nemakomo."
"KUPEDZIRA KWENYAYA YOKUTI YAKASVIKIRA, DAMBUDZIKO RISINA KUPONESWA"
Vachitaura nezve iyo Harbour-Hal Interchange, Mutungamiri Engin akataura kuti iyo J Junction, iyo yaipedzwa basa, haina kushanda zvakaringana nekuda kwechiteshi chinopinda-chabuda traffic uye yakashandisa zvirevo zvinotevera: nzira yekupinda-yekubuda inofanira kutorwa munzvimbo yayo nekukurumidza. Migwagwa yemafambiro emudondo isingapfuuri nevanofamba netsoka uye nemadziro echiteshi inogona kushandurwa kuti ipe kumwe kuwedzera kwemugwagwa. Turafiki munzira inoenda kuchiteshi inogara ichikandirwa. Hal junction yapera asi dambudziko remumigwagwa harina kugadziriswa. Zvekare, nyonganiso imwechete inoenderera mberi. Kana Mersin Port ikasaita formula iyi, hapana mhinduro ye traffic ipapo. "Basa rehurumende jini hariite sechisungo nekuda kwekuyambuka."
URI KUTAMBUDZIRA KUTI PASI PANYANYA ZVINHU ZVINOGONESA ZVINOGONA KUTI ZVINOGONESA ”
Ichisimbisa kuti zvifambiso kubva kunzvimbo dzekugara kuenda kunzvimbo dzinoshanda uye maindasitiri zvinofanirwa kufambiswa, Mutungamiri Engin akati, "Chinhu chikuru chinofanira kutaurwa ndechekuti vashandi vedu vemaindasitiri vanowana kushomeka kwemaminitsi e45 pamusuwo wekumabvazuva vachipinda muguta kubva kuOIZ pamutsetse wekumabvazuva. Hakuna imwe nzira iri kunze kweiyo nzira, saka isu tinoti; 2. 18 zonging application inofanirwa kuvhurwa nekukurumidza sezvinobvira kubva kuIndia Road kuenda kuTarsus Organised Industrial Zone. Nekupera kwemugwagwa uyu, pachave nekupinda imwe nzira yekupinda muDeliçay unova wega suwo wekupinda Mersin kubva kumabvazuva. Iko kusimba kuno kuchadzikira. Panguva imwecheteyo, zvakakosha kwazvo kuronga nzira yekuvhenekera njanji kunzvimbo dzekumaindasitiri kubva pamugwagwa uyu unozokwidziridzwa, maererano nekutengesa mumaguta ”.
Metro kuronga kunofanira kuitwa panzvimbo peGaziantepe tram 29 / 01 / 2014 To Gaziantep chitima panzvimbo muchivande kuronga zvinofanira kuitwa: Gaziantep Chamber of Architects kuteerera zvinetso guta mberi omunzvimbo musarudzo çekti.gaziantep Chamber of Architects Sachigaro Sıtkı Severoğlu, kunyanya motokari uye zoning plan, kusanganisira mishumo yagadzirwa matambudziko uye nzira dzokuagadzirisa nadzo noruzivo muguta, akati ichapa meya kwayo. Severoğlu, 'Local Election Declaration' zvose zvinetso guta omunharaunda mamaneja kuchaita vanoshuma wakagadzirwa purezidhendi nezita akataura kuti vanzwisise vaviri zvinotsiva. Sıtkı Severoğlu akabata venhau panguva Chamber of Architects, akazivisa kuzivisa kofanogadzirwa sarudzo yemo. Severoglu, iyo ndiyo dambudziko guru reguta, ndiyo nzira.
Chiedza chekutari chechiedza chinofanira kuvakwa muManisa 12 / 07 / 2012 Kupindura mubvunzo wekuti vatapi venhau vanogona kubatsira kuWSB mumunda wepepe, Türek vakati, konusunda Zvechokwadi iri chirongwa chakaisvonaka. Misoro yakadai seyendo uye tsika dzezvikoro ndiyo nyaya inofanira kunge iri pamagariro eMeya. Tinomuremekedza. Panguva imwecheteyo, ivo vari pane zvavanotarisa uye isu tine chikamu pamusoro pekutakura kwevanhu kunoenderana zvikuru nesu. Ndinotarisira kuti tinokwanisa kugadzirisa naCengiz Bey; Tichakwanisa kupayona magetsi ekutsvaga kubvisa bhazi-motokari yemugwagwa pakati peManisa neHurongwa hweZvina Industrial, isu tichataura pamusoro pavo. Chiedza chekuyera chetsika hachidziviriki pakati pezvitima zvitsvuku uye Manisa chaiyo
Sakarya Metropolitan Municipality Light Railway Project Bazaar Center - Yenikent pakati pe2. Phase Light Rail System Line 25 / 07 / 2012 Sakarya Metropolitan Municipality Presidency, "Arcade Centre - Yenikent pakati 2. Zvitsva zvinoitika pamusoro peStage Light Rail Line Project Sistem zvakanyorwa. Maererano nemashoko akawanikwa neAvestments Magazine; rokutanga mabasa uye zvidzidzo chokuita kugadzirira pre-feasibility zvidzidzo zviri kuramba. Apo vakuru isu vakabvunzurudzwa pamusoro nyaya yokudzidza uye akanyorwa kuti nyoro chirongwa kuchaita 480 zuva kuti kubva musi 2013 gore mari chirongwa pashure pokupedza kudzidza. Kuti uwane mamwe mashoko, tapota, chengeta: Inotengeswa Inzvimbo: Inotengeswa
Sakarya Metropolitan Municipality Light Railway Project Bazaar Center - Yenikent pakati pe2. Phase Light Rail System Line 30 / 07 / 2012 Sakarya Metropolitan Municipality Presidency, "Arcade Centre - Yenikent pakati 2. Zvitsva zvinoitika pamusoro peStage Light Rail Line Project Sistem zvakanyorwa. Maererano nemashoko akawanikwa neAvestments Magazine; rokutanga mabasa uye zvidzidzo chokuita kugadzirira pre-feasibility zvidzidzo zviri kuramba. Apo vakuru isu vakabvunzurudzwa pamusoro nyaya yokudzidza uye akanyorwa kuti nyoro chirongwa kuchaita 480 zuva kuti kubva musi 2013 gore mari chirongwa pashure pokupedza kudzidza. Sezvazvakanyorwa zvinozivikanwa, muna January 04 2012 zuva zvinopiswa unganidzwa "Public Transport Pokutanga Transport Master Plan uye gadziriro rokutanga Feasibility Study pamwe yavaizofanoshandisa Design pamusoro Systems Consulting Service" akunda pebumhudza nokuda ouinjiniya yakasimba Mescioğlu ...
Sakarya Light Rail System Project pakati peC Çarşı Center neYenikent 2. preliminary project uye pre-feasibility yekudzidza kwechitsiko chezvitima 28 / 03 / 2013 Pakati peSakarya City Metropolitan, Çarşı Center - Yenikent 2. Zvitsva zviri kuitika zvakanyorwa pamusoro peSakarya Light Rail System Project. Maererano nemashoko akawanikwa neAvestments Magazine; Purojekiti yekutanga uye zvidzidzo zvekutanga zvinogona kuitwa. Vakuru, mushure mekupedzwa kwemabasa muhafu yepiri yeTV yekambani yekuvaka inogona kuuya. Sezvazvinozivikanwa, zvidzidzo zvemigwagwa yemutsara, iyo inenge makiromita 2013 yakareba, yakapedzwa. Company uye yakapiwa kuMasipala. Nzira iyo inogadziriswa mumugwagwa ichagadzirirwa maererano neSarongwa yeMatongerwo Ekutakura Sakarya. Kuti uwane mamwe mashoko, tapota, chengeta: Inotengeswa Inzvimbo: Inotengeswa
Yakawedzera Metro Nzvimbo muIstanbul
Metro kuronga kunofanira kuitwa panzvimbo peGaziantepe tram
Chiedza chekutari chechiedza chinofanira kuvakwa muManisa
Sakarya Metropolitan Municipality Light Railway Project Bazaar Center - Yenikent pakati pe2. Phase Light Rail System Line
Sakarya Light Rail System Project pakati peC Çarşı Center neYenikent 2. preliminary project uye pre-feasibility yekudzidza kwechitsiko chezvitima
Sakarya Light Rail System Project Project - Yenikent 2. Purojekiti yekutanga uye zvidzidzo zvekutanga zvinogona kuitwa
Metrobus iri kuuya kuna Şanlıurfa pane Light Rail system
Chifambiso cheGirare Chiedza Chinokurudzirwa Panzvimbo yeTram
Boztepeye kabhoni yemotokari uye rail system inofanira kuitwa
Pakati peMalatya naElazığ